Waqtiga doorashada Somaliland oo dib loo dhigay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Doorashada madaxtinimo ee maamulka Somaliland oo la filayey in la qabto bisha June ee sanadkan ayaa u muuqata iney dib u dhacday kadib markii maanta guddiga dooraashooyinka shaaciyey waqtiga la qabanayo diiwaangelinta cod-bixiyaasha.
Guddida doorashooyinka Qaranka Somaliland, ayaa iclaamiyay inay diwaangalinta codbixiyeyaasha bilaabi doonaan bisha July ee sannadkan ama ka bacdi Bisha Ramadaan.
Diwaangalinta ayaa socon doonta muddo ku siman 4 bilood, iyadoo intaas dibna ay jiri doonaan diyaar garowyo kale, wixii wakhtiyadaasi ama dhamaadka sanadkanna la go’aamin doono wakhtiga doorashadu ku qabsoomayso.
Guddida doorashada ayaa sidaasi sheegay kadib kulan saacado badan qaatay oo dhex maray guddida iyo xisbiyada qaranka, waxaanu afhayeenka guddida Siciid Cali Muuse oo saxaafadda la hadlay ka gaabsaday qorshahooda dib u dhaca doorashada, isagoo ku dooday inay hadda shaacinayaan kaliya qorshaha diwaangalinta.
“Wakhtiga doorashada annagu ka hadli mayno ee sidaanu idiin sheegnay wakhtiga diwaangalinta codbixiyeyaasha ayaanu ka hadlaynaa.Diwaangalintu haddii Eebbe idmo waxay bilaaban doontaa Ramadaan ka bacdi. Waxaanu isla garanay Xisbiyada inaan Ramadaan la shaqayn karan, sidaas darteed in Diwaangalinta la bilaabo marka Ramadaan dhamaato amaba bisha July Aakhirkeeda. Diwaangalintu waxay soconaysaa afar bilood. Waxa ku xigi doonta bil iyaduna noqonaysa bishii wax la kala saarsaarayay oo dadkii iyo qalabkii la soo diwaangaliyay oo dhan halkan iskugu iman doonaan” ayuu yidhi Afhayeenka Komishanku.
Afhayeenka Komishanka Siciid Cali Muuse, oo la waydiiyay dib u dhaca doorashadu waxa uu ku jawaabay “Annagu idin odhan mayno doorashadu dib bay u dhacday, laakiin, waxaanu ka hadlaynaa waa diwaan galin idinku sidaad doontaan u fasirta wakhtiga doorashada”
Saddexda Xisbi qaran ayaa iyaguna sheegay inay komishanka la qaateen Qorshaha diyaarinta doorashada. Cabdirashiid Riyo-raac iyo Cabdinaasir Qodax oo u hadlay Ucid iyo Waddani, iyo Jaamac Shabeel oo u hadlay Kulmiye ayaa sheegay inay isla waafaqsan yihiin hawlaha guddida doorashadu ku diyaarnayso Doorashada iyo diwaangalinta.
Xafiiska R/wasaaraha Soomaaliya oo gaadiid ka helay hayadda UNDP